Nepal Mamila | 'किड्नी फेल भएका मेरा बाबाले चलाएको स्कुल हेर अनि तिमीले चलाएको देशको हालत हेर': आदर्श मिश्र - Nepal Mamila 'किड्नी फेल भएका मेरा बाबाले चलाएको स्कुल हेर अनि तिमीले चलाएको देशको हालत हेर': आदर्श मिश्र - Nepal Mamila
‘किड्नी फेल भएका मेरा बाबाले चलाएको स्कुल हेर अनि तिमीले चलाएको देशको हालत हेर’: आदर्श मिश्र
काठमाडौँ – मंगलबार बिहान कमेडियन आदर्श मिश्रका बुवा विनोद मिश्रको मृत्यु भयो। विगत ४ वर्षदेखि मिर्गौला रोगसँग लडिरहेका आदर्शका बुवाको निधनपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुराहरु उठिरहेका छन्। बुवाको मृत्युपछि शोकमा रहेका आदर्शले १० मिनेट लामो भिडियो सामग्रीमार्फत आफ्नो दु:ख पोखेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘बाबा अब हुनुहुन्न। मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पूरै जिम्मेवार नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने दुई हप्ता अगाडि बाबालाई डायलाइसिसमा लैजाँदा एचपिओ टु छ, यहाँ डायलासिस हुँदैन भनेर एनएमसीबाट निकालिदिएको हो। ४ वर्ष बाबाले एनएमसीमा डायलासिस गराउनुभयो। प्रति डायलासिस सरकारले ३५ सय दिन्छ। कमाउने बेलामा तिमीहरू कमाउने। बिरामीलाई गाह्रो भएको बेलामा धपाउने?’
‘कमिसनका लागि एउटा डाइलोजरले १२ वटासम्म डायलासिस गरेका छन् मेरो बाबाको। ८/९ वटा त मिनिमम छ। मसँग छ सबै लिस्ट। गत वर्ष नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदा खेरि त्यहाँका पेसेन्टहरुलाई सीमा सिफ्ट गरेको थियो। एक महिनामा ५ जना मानिस मरेका थिए–डायलेजर नफेरेर। नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउन अति धाँधली गरिरहेको छ।’
एनएमसी अस्पताललाई गत साता केन्द्रले २० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउन भनेर आदेश दिएको बताउँदै आदर्शले भनेका छन्, ‘एनएमसीले म केन्द्रको आदेश मान्दिनँ भन्यो। किन भन्यो? एनएमसीको फाउन्डर बसरुद्धिन अन्सारी हुन्। उनी अति नै शक्तिशाली छन्। गुण्डागर्दी उहाँको अति नै धेरै चल्छ। उनलाई केरकार गर्न सक्ने कोही पनि छैन।
उनी यति शक्तिशाली हो कि गत वर्ष केपी शर्मा ओलीको किड्नी प्रत्यारोपणमा जति पनि खर्च भएको हो बसरुद्धिन अन्सारीले व्यक्तिगत रूपमा तिरेको हो। प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उहाँले त्यो कुरा अनाउन्स गरेको हो। कलेजमा विद्यार्थीहरूले शुल्क बढायो, सुविधा छैन भनेर आन्दोलन गर्दा गुण्डा बोलाएर कलेजमा विद्यार्थी कुट्न लगाएको हो। त्यतिसम्म घटिया अस्पताल हो एनएमसी।’
एनएमसीको गुण्डागर्दीले गर्दा आफूले बाबा गुमाउनु परेको उनले भिडियोमा बताएका छन्। भिडियोमा अस्पतालकी नर्सलाई पनि सम्झना गरेका छन्। उनले आफ्नो बुवाले जति ढंगले देश चलाउन नसकेको भन्दै केपी ओलीलाई पद छाड्न चुनौती दिए। मिश्रले किड्नी फेल भएर पनि बुवाले जिल्लामा नमुना विद्यालय चलाएको भन्दै ओलीले चलाएको देशको हालत हेरिनसक्नु रहेको गुनासो गरे। ‘ओलीले कुर्सी छाडिदिए हुन्छ। किड्नी फेल भएका मेरा बाबाले चलाएको स्कुल हेर अनि तिमीले चलाएको देशको हालत हेर’, उनले भने आँसु बहाउँदै भने।
‘डाक्टरले बुवाको ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो, उहाँको ४ घण्टा डायलाइसिस गराइदिनु भन्नुभयो। डाक्टर हुँदा ४ घण्टा सेट गरेको टाइमर डाक्टर गएपछि ३ घण्टामा झारिदिने! एक घण्टा टाइम घटाएर मेरो बुवाको बाँच्ने आयु पनि घटाइदिएको हो नि दिदी हजुरले। हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला तर कोही मान्छे चाहिँ घर पुगेनन् क्या ! घरै पुगेनन्, एक घन्टा घटाइदिनाले। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद !’
भरतपुर अस्पतालको बेवास्ता बारे उनी बताउँछन्, ‘सर १०५ डिग्री ज्वरो छ। बुवाको होस छैन। डाक्टरले एचपिओ टु ठिक छ भाइ, भाइटल्स ठिक छ भनिरहे। आइसियुमा राखिदिनोस् न सर भन्दाभन्दै बिहानको १० बजे बाबा बित्नुभयो।’